Infinite Word Search Puzzles 3.54g Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.54g လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား စကားလံုး Infinite Word Search Puzzles
Infinite Word Search Puzzles ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆုံးမဲ့ Word ကိုရှာရန်တစ်ဦးအမေရိကန်ဂန္ထဝင်အပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုသော In-depth ကိုယူပါ! 35 ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအောက်တွင်ကစားရန်နှင့်ကစားမျိုးစုံသည် Modes နှင့်စတိုင်များနှင့်အတူဒီဂိမ်းအဆုံးအပေါ်နာရီစကားလုံးမြားကိုရှာဖှငျသညျစောငျ့ရှောကျမညျ! ရုံသငျသညျအများဆုံးကြိုက်အမျိုးအစားကိုရှာဖွေအပေါင်းတို့နှင့်တကွလမ်းညွန်အတွက်စကားသည်အ peeled သင်၏မျက်စိစောင့်ရှောက်စေ!
တိုးမြှင့်အခက်အခဲ၏ 30 အဆင့်ဆင့်ကတဆင့်သွား, တိုးတက်မှု Mode တွင်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ရန်, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခက်အခဲ setting ကိုနှင့်အတူအမှုအရာဖြေရှင်းနိုင်ရှိရာပိုပြီးပေါ့ပေါ့ Infinite Mode ကိုထွက်ကြိုးစားပါ။ သငျသညျ play အဖြစ်, သငျသညျအနှံ့ထိ မိ. လဲခြင်းနှင့်အောင်မြင်မှုများကိုသော့ဖွင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျစကားသည်အရှာဖွေအဖြစ်အားလုံး 10 အောင်မြင်မှုတွေစုဆောင်းဖို့ကြိုးစားပါ!
သင်အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်မျိုးပါပဲလျှင်, ထို့နောက်သူအများအပြား Mode ကိုသင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုဖွင့်အဘယျသို့ဖွစျသညျ! သင်၏အဆွေခင်ပွန်းသို့မဟုတ်အရှိဆုံးစကားလုံးမြားရှာတှေ့နိုငျသငျတို့အရာကြည့်ဖို့တစ်ပြေးပြိုင်ပွဲအတွက်လူစိမ်းဆန့်ကျင်ချွတ်ရင်ဆိုင်ရ! ယင်းနောက်သင်ကစားသမား၏ကျန်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရပ်ကိုဘယ်လိုမြင်မှဦးဆောင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
multiplayer features တွေပါဝင်:
လျင်မြန်စွာပွဲစဉ် - အဘယ်သူမျှမ log-in နဲ့မဆိုမျိုးလိုအပ်၏အဘယ်သူမျှမလုပ်ရတဲ့, သင်ရုံဒီ mode မှာကျပန်းကစားသမားနှင့်အတူလက်ျာဘက်တစ်ဦးပွဲစဉ်သို့ခုန်နိုင်ပါတယ်။ မလိုအပ်နေချိန်မှာသင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ, သင်သည်သင်၏တိုးတက်မှုကိုကယ်တင်နှင့်အခြားကစားသမားသင့်ရဲ့စံချိန်နှင့်အတူပဲနည်းနည်းခြိမ်းခြောက်စေမည်။
သူငယ်ချင်းများ Play - app ကိုနှင့်သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုချိတ်ဆက်ပါနှင့်ဆုံးစကားရှာတဲ့မျိုးနွယ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဆန့်ကျင်ကစား။
ဦးဆောင် - သင့်ပွဲပြီးနောက်ဦးဆောင်ပေါ်သို့ခုန်နှင့်သင်တို့၏စံချိန်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းကမှနှိုင်းယှဉ်ပုံကိုစစ်ဆေး! သငျသညျနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောသင့် Facebook အကောင့်ကိုရှိပါကထိုအသင်ပရီမီယံကစားသူအများအပြားအမှတ်သင်ပုန်းဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ပဲလွန်းကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာထက်ပိုမိုမြင့်မားစေခြင်းငှါရည်ရွယ်, သင်၏မိတ်ဆွေများထက်ပိုမိုမြင့်မားစေခြင်းငှါရည်ရွယ်မထားပါနဲ့!
အဆုံးမဲ့ Word ကိုရှာရန်ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်ငုပ်လက်ျာဘက်၌၎င်းသင်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတစ်ခုတည်းနဲ့ multiplayer Word ကိုရှာရန်ပဟေဠိ၏နီးပါးန့်အသတ်ငွေပမာဏကိုပျော်မွေ့!
Infinite Word Search Puzzles အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Infinite Word Search Puzzles အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Infinite Word Search Puzzles အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Infinite Word Search Puzzles အား အခ်က္ျပပါ
hot105 စတိုး 5.61k 1.31M
Infinite Word Search Puzzles ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Infinite Word Search Puzzles အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.54g
ထုတ်လုပ်သူ Random Logic Games, LLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://randomlogicgames.com/privacy_policy.php
File Size: 48.32MB
Release date: 2019-06-05 11:25:13
လက်မှတ် SHA1: 02:B0:9E:A9:9A:C7:82:5B:BE:8D:61:AC:C6:EA:A4:98:49:C4:C3:DF
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Andrew Stone
အဖွဲ့အစည်း (O): randomlogicgames
နယ်မြေ (L): US
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): US
Infinite Word Search Puzzles APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ